Uqoqosho lwehlabathi: yintoni, yintoni izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga | Ezezimali
Encarni Arcoya | | Ezopolitiko kwezoqoqosho
Enye yeengcamango ezivakala kakhulu kwiminyaka embalwa kumcimbi wezoqoqosho yinto ebizwa ngokuba yi-global globalization. Eli xesha, ekunzima ukuliqonda, libandakanya nolunye lolona lwazi lubalulekileyo kuqoqosho.
Kodwa, Yintoni ubumbano lwezoqoqosho? Zeziphi izibonelelo kunye nokungalunganga onako? Yenzelwe ntoni?
1 Yintoni ubumbano lwezoqoqosho
1.1 Yintoni ebonakalisa uqoqosho lwehlabathi
2 Izinto eziluncedo nezingeloncedo kudityaniso lwezoqoqosho
2.1 Izinto eziluncedo kumhlaba wonke wezoqoqosho
3 Ngaba ukulunga kwehlabathi kulungile okanye kubi?
Yintoni ubumbano lwezoqoqosho
Singaluchaza ubumbano lwezoqoqosho njenge "Umdibaniso wezoqoqosho noworhwebo owenzeka kumazwe aliqela, kwinqanaba lesizwe, nakwilizwe jikelele, kwaye injongo yabo ikukusebenzisa iimpahla neenkonzo zelizwe ngalinye." Ngamanye amagama, sithetha ngesakhono samazwe sokudibanisa iimpahla kunye neenkonzo kunye nokuseka imigaqo-nkqubo yezoqoqosho kunye neyorhwebo phakathi kwala mazwe azenzayo.
Ngale ndlela, a ukukhula okuphezulu kuwo onke amazwe, kodwa nakwimiba emininzi ezifana netekhnoloji, unxibelelwano, njl.
Yintoni ebonakalisa uqoqosho lwehlabathi
Nangona umxholo sele uyenza icace le nto sibhekisa kuyo kuqoqosho lwehlabathi, kuyinyani ukuba kukho ezinye zeempawu ekufuneka zithathelwe ingqalelo leli xesha. Kwaye yile:
Ulawulwa ngokusekwe kwizivumelwano ezilawulwa zaza zasekwa phakathi kwamazwe avumayo ukudibanisa iiasethi zawo kunye nezixhobo, ukutyikitya nokunyanzelisa. La ngamaxwebhu orhwebo olukhululekileyo, okanye iibhloko zoqoqosho, ezijongene nokulawula umsebenzi olungileyo wamazwe.
Se ukhuthaza ukudalwa kwemisebenzi, kunye noqoqosho lwala mazwe abandakanyekayo. Ngale ndlela, inyani yokukwazi ukufumana umsebenzi ofanelekileyo, nokuba ayikho kwilizwe elinye, inceda ukuqhubela phambili kophuhliso.
Los iimpahla kunye neenkonzo zingeniswa ngaphakathi kwaye zithunyelwa kwelinye ilizwe. Oko kukuthi, ezo mveliso ilizwe elinye lingenalo, kodwa elinye linakho, linokuba nenkululeko enkulu yokungenisa elizweni, kwaye kwangaxeshanye, abanako kwaye banomdla olinganayo kwamanye amazwe.
Uqoqosho lwehlabathi ikhona phantse kulo lonke ihlabathi. Kodwa bahlala bevumelana phantsi kwezivumelwano ezahlukeneyo (ngokwamazwe asayinileyo).
Izinto eziluncedo nezingeloncedo kudityaniso lwezoqoqosho
Okwangoku kwinqaku, kunokwenzeka ukuba sele unombono wokuba kulungile okanye kubi ukuba ukudityaniswa kwehlabathi kukho. Kwaye inyani yile, njengakuyo yonke into, inezinto zayo ezilungileyo nezinto zayo ezimbi. Ngesi sizathu, xa kutyikitywa izivumelwano, amazwe athanda ukuhlalutya kakhulu ukuba lilungile ilizwe okanye akunjalo.
Izinto eziluncedo kumhlaba wonke wezoqoqosho
Phakathi kwemiba emihle esinokuthiya ngayo malunga nehlabathi kwezoqoqosho, sine:
Iindleko zokuvelisa imveliso ziyawa. Ngenxa yokuba kukho unxibelelwano phakathi kwamazwe, iindleko zeemveliso zihlala zingabizi kakhulu, zivumela ukuveliswa kwemizi-mveliso kungabizi kakhulu. Oku kuchaphazela nexabiso lokugqibela leemveliso, oko kuthetha ukuba iimpahla kunye neenkonzo zinokunikezelwa ngamaxabiso aphantsi.
Yandisa ingqesho. Ngokukodwa kumazwe afuna abasebenzi, kodwa nakwabo bonyusa ukungenisa ngaphakathi kunye nokuthumela kwelinye ilizwe, kuba bafuna abasebenzi ukuze benze lo msebenzi ngokwawo.
Kukho ukhuphiswano phakathi kweenkampani. Oku kunokunyangwa njengento elungileyo, kodwa nanjengento embi. Kwaye ngaba ukhuphiswano phakathi kweenkampani luhlala luyinto elungileyo, kuba iya kunyusa iimveliso, ikhuthaze ubuchule kuzo kwaye izame ukubonelela ngeempahla kunye neenkonzo ezingcono. Nangona kunjalo, kunokuba kubi ngengqondo yokuba kukhuphiswano oluninzi kunzima ngakumbi kumashishini amancinci ukukhuphisana namakhulu.
Ngokukhawuleza xa uvelisa, Ngaphezu kwako konke kuba zonke iitekhnoloji kunye nezinto ezintsha zibekwa kwinkonzo zawo onke amazwe kwaye, ngale nto, kunokwenzeka ukwandisa itekhnoloji kwaye wenze ukuba wonke umntu aqhubele phambili kwicala elinye, ukongeza ekukhuthazeni uphuhliso lwehlabathi.
Kodwa ayisiyiyo yonke into elungileyo, zininzi izinto ezimbi esiziziswa sisiseko somhlaba kwezoqoqosho, ezinje:
Ukungalingani kwezoqoqosho. Nangona besitshilo ukuba amazwe enza indima yawo ukuze iimpahla neenkonzo zithengiswe phakathi kwabo bonke, kuyacaca ukuba uqoqosho lomntu ngamnye kwilizwe ngalinye lunefuthe kuphuhliso, ngohlobo lokuba kubekho iyantlukwano phakathi koqoqosho olunye nolunye.
Ubume bendawo buchaphazelekayo. Ukuya kwinqanaba elikhulu okanye elincinci. Kungenxa yokuba, ngemveliso ephezulu, kuyakubakho nongcoliseko ngakumbi, yiyo loo nto kubalulekile ukuba kusekwe imigaqo-nkqubo yokuhoya okusingqongileyo.
Ukungabikho kwemisebenzi ephezulu. Ewe, kuyaphikisana ngokubhekisele kwinto ebesikhe sayithetha ngaphambili, ukuba imisebenzi engaphezulu yaveliswa. Ingxaki kukuba, njengoko kukho isixa esikhulu sabasebenzi, iinkampani ziya kuhlala zifumana abo basebenzi benoqoqosho ngakumbi, kwaye kuya kwenzeka okufanayo nakubasebenzi. Kuthetha ntoni oku? Ewe, kuya kubakho ukungabikho kwemisebenzi kumazwe anabasebenzi abiza kakhulu.
Uphuhliso oluncinci. Ngokunciphisa amathuba oshishino (kule nto sikuxelele yona malunga nokhuphiswano kushishino) oluchaphazela kakubi uqoqosho lwelizwe.
Ngaba ukulunga kwehlabathi kulungile okanye kubi?
Kuxhomekeke kwilizwe obuzayo, liya kukuxelela into ethile okanye enye. Njengoko sele ubonile, inezinto zayo ezintle kwaye azikho izinto ezintle kangako, kwaye oko kuchaphazela ilizwe lilinye, nokuba kungalicebisa okanye kungaphantsi.
Kodwa ukuze ungayonakalisi, kukho izivumelwano zorhwebo. Ezi zisayinwe ngokudibeneyo, ukuba ziphakathi kwamazwe amabini; okanye kumazwe amaninzi ukuba ibandakanya amazwe aliqela. Kwaye bamisela ukuba zeziphi imigaqo emazilandelwe. Ilizwe ngalinye kufuneka liluhlolisise olu xwebhu ngaphambi kokulusayina ukuze lukwazi ukwazi ukuba loluphi na olulungele bona okanye, ukuba akunjalo, kungcono ukuba uqhubeke njengangaphambili.
Olunye ukhetho olusetyenzisiweyo Sebenzisa iibhloko zoqoqosho, Oko kukuthi, imigaqo eqhutywa phakathi kwamazwe aliqela ukuseka iimfuno ngokubhekisele kwimiba ethile: uluhlu lweerhafu, iimveliso ezivela kwamanye amazwe, njl.
Ukudityaniswa kwehlabathi nakoqoqosho nako kunokwenzeka unilaterally, kwakwelo lizwe linye, umzekelo ngokulawula amaxabiso erhafu, iimfuno zokungenisa okanye ukuthumela iimveliso kwilizwe, njl. Yiyo loo nto uqoqosho lweli lizwe luchaphazeleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Uqoqosho lwehlabathi